MACLUUMAADKA IYO SAWIRADA TARANKA EEYAHA PATTERDALE TERRIER DOG - EEYAHA
Macluumaadka iyo Sawirada Taranka Eeyaha Patterdale Terrier Dog
Beau Terter Terrier ee 1 sano jir ah
Liiska eeyaha ee loo yaqaan 'Patterdale Terrier Mix Breed Dogs'
Madaxa Patterdale waa mid xoog badan oo awood badan, oo dheelitiran cabirka eeyga, iyo xajmi ama trapezoidal qaabeysan markii laga fiiriyo xagga hore. Dhererka dhakada iyo masku wey siman yihiin, ama masarka xoogaa wuu ka gaaban yahay dhakada. Jowl iyo muuska waxay leeyihiin walax wanaagsan. Afka waa inuu ahaadaa mid xoog leh, oo aan marnaba u muuqan mid jilicsan ama daciif ah. Ilkaha cadcad ee adag, cadcad waxay ku kulmaan maqas ama qaniinyo heer ah. Ilkaha jabay ama jeexjeexyada lumay shaqada awgeed looma ciqaabayo. Indhaha si ballaadhan ayaa loo dhigay madaxa dhakada oo si ballaadhan ayay u kala fog yihiin. Sida Terrier-ka dhulka ka shaqeeya, waxaa muhiim ah in indhuhu aysan soo bixin ama aysan soo bixin. Midabka indhaha waa inuu ahaadaa mid la jaan qaadaya midabka jaakada, laakiin marna ma noqon doono buluug. Dheguhu waa qaab saddex-geesood ah, oo cabbir yar oo dhexdhexaad ah, oo si adag isugu laaban meel ka hooseysa qalfoofka. Tilmaamuhu waxay tilmaamayaan geeska banaanka isha. Sanku waa madow yahay marka laga reebo eeyaha midabka midabka leh, ee leh sanka cas. Qoorta waa nadiif, muruq iyo dherer dhexdhexaad ah, oo si tartiib tartiib ah uga sii fidaya naaska isla markaana si habsami leh garbaha ugu soo dhacaya. Garabku waa dheer yahay, foorarsanayaa oo si fiican dib loo dhigay. Xididdada hore waa xoog badan yihiin oo toosan yihiin, oo leh laf wanaagsan. Xusullada waxaa loo dhigay meel u dhow jirka laakiin si xor ah ayey u socdaan. Pasterns waa kuwo awood badan oo dabacsan. Jidhku waa inuu ahaadaa laba jibbaaran ama in yar ka dheer dhererkiisa, oo laga cabiraa barta garabka ilaa barta badhida, iyo inuu u engego dhulka. Dhabarku waa dherer dhexdhexaad ah oo heer ah, oo ku milmaya muruq muruqa ah, wax yar oo qaansada ah oo qafiif ah. Laabtu waa inay ahaato mid adag oo jilicsan, qoto dheer ilaa heerka suxulka laakiin dhexdhexaad ah oo ballac ah iyo qaab muuqaal ah oo oval ah. Xawaareynta ayaa qayb muhiim ah ka ah nidaamka garsoorka ee Patterdale Terriers. Waa in loo kala bixiyaa si loo tijaabiyo cabbirka, isku-xoqitaanka iyo dabacsanaanta. Patterdale waa inuu ahaadaa mid awood u leh inuu si toos ah ugu fidiyo garbaha gadaashiisa celcelis ahaan gacmaha nin gacmihiisa. Markaad taako fidinayso, ka qaad lugaha hore dhulka ama miiska oo si tartiib ah u tuuji salka xabadka si aad u hubiso inuu xabadka isku cadaadin doono. Xaga dambe waa xoog badan yihiin waana muruqsan yihiin. Lafaha, ciqaabta iyo muruqyada ayaa la mid ah tan xarunta hore. Steifyadu si fiican ayey u laaban yihiin oo hocksyadu si fiican hoos ayaa loo soo dajiyey. Markuu eeygu taagan yahay, gaagaaban gaagaaban oo gaaban oo xoog leh ayaa dhulka ku toosan, marka gadaal laga eegona waa la is barbar socdaa. Dabada ayaa sare loo dhigay laakiin dhabarka lagama dul qaadanayo. Haddii la soo xirto, kaliya rubuc ilaa saddex meelood meel waa in laga saaraa, maadaama mararka qaarkood dabada ay tahay tan kaliya ee eyga looga soo saari karo bohol. Dabada waa inay ahaato mid xoog badan laakiin aan aad u weyneyn. Ma jiro wax doorbid ah oo u dhexeeya xirashada ama dabiiciga. Koodhku wuxuu noqon karaa mid jilicsan ama jaban. Labada nooc ee jaakad, waa inuu jiraa jaakad gaaban oo cufan. Qiyaas aad u yar ayaa loo baahan yahay si ay u ilaaliso jaakadu caafimaad qab. Jilicsan: timuhu waa kuwo kacsan, cufan oo adag, oo dib ugu soo noqda meesha markii la qaado. Mawjad ma jirto. Jajabay: jaakad dhexdhexaad ah, oo leh timo ilaalin ah oo ka dheer tan jilicsan. Timaha waardiyuhu waa kuwo jilicsan oo jilicsan oo jilicsan. Eyga dahaarka leh ee jaban ayaa laga yaabaa ama laga yaabaa inuusan laheyn weji alaab ah oo sameeya gadh, shaarib iyo sunnayaasha. Midabada la aqbali karo waxaa ka mid ah madow, casaan, beer, culeys, madow iyo midab, iyo naxaas, mid adag ama leh calaamado cad cad xabadka iyo cagaha.
Terter Terter-ka waa Terrier-gadaal gadaal loo dhigay, mana aha sida uu u faraxsan yahay sida kuwa kale ee Terrier-ka loo yaqaan. Waxay ku raaxeysataa 'isku laabidda tuubada kuleylka' ee guriga. In kasta oo cabirka yar ee Patterdale Terrier uu u qalmi karo as a eey toy , Awoodiisa iyo ciyaartiisuba waxay u arkeen inuu yahay argagax adag go'aankiisa iyo adkeysigiisa ayaa dalbanaya in lagu daro kooxda mastiff. Waxay yihiin ciyaar iyo adadag markii la ugaarsanayo. Ugaadhsato badiyaa waxay raacaan saddex ama afar eey iyaga oo socdaal ku jira. Terter Terrier-ka waa ilaalin fiican. Tani ma aha eey u ah taageere aan cabsi lahayn ama qalbi jilicsan. Terter Terrier-ku waa ugaarsade adag, madaxbannaan oo loo kaliyeelay oo loogu talagalay adeegyada waxqabadka sida jiir iyo wehel ugaarsi. Ay Khadka dhiigga ee Bull Terrier ka dhig mid aad u kulul si aad ugu shaqeyso ugaarsade wata boorsooyin pack ah. Waxay gaar ahaan yihiin kuwo adag oo joogto ah. Qaar badan Foxhound milkiilayaashu kuma mahad celin doonaan inaad isku dayday inaad dawacadiisa ku xirto Patterdale oo qaniinyo qaniinyo badan leh, waayo eeygu waxay u badan tahay inuu qabsado oo tago, laga yaabee inuu dilo dawacada halkii uu u oggolaan lahaa inuu boodboodo, sidaasna ugaarsiga ugaarsiga ku dhaca. . Waa qodayaal aad u fiican, oo si xeel dheer u doonaya inay la kulmaan oo weeraraan xayawaan kasta oo dhulka galay. Burburinta waddanka woqooyiga, iyadoo la ilaalinayo dawacooyinka loo yaqaan 'borrans', caarada dhagaxa, miinooyinka iyo qulqulka, waxay abuureen baahida loo qabo terrier adag oo awood u leh inuu ku wareego dhulka oo aan cabsi lahayn oo ku filan inuu dhulka tago. Patterdale wuu buuxiyay, welina wuu buuxinayaa, baahidaas. Danta xijaableyda maxalliga ahi waxay hubisaa jiritaankeeda. Noocani ma fududa in la adeeco tareenka. Patterdale waa in aan lagu aaminin xayawaanka aan xayawaanka ahayn . Hubso inaad noqotid tan adag, kalsooni leh , iswaafaqsan hogaamiyaha xirmada si looga hortago dhibaatooyinka dhaqanka laga bilaabo horumarinta. Laguma talin celceliska milkiilaha xayawaanka. Waxay u baahan yihiin inay maskaxdooda caqabad ku noqdaan oo ay la socdaan waxyaabo badan jimicsi maskaxeed iyo mid jireed . Haddii ay dareemaan inaadan u xoog badnayn sida ay yihiin, waxay rumaysan doonaan inay yihiin alfa oo aadamuhuna arrimaha ku dhex geli doono. Ha u ogolaan eeygan inuu horumariyo Cudurka Dog yar .
Dhererka: qiyaastii 12 inji (30 cm)
Miisaanka: 11 - 13 rodol (5 - 6 kg)
Terter Terrier-ka laguma talin karo nolosha guriga. Noocani waa mid aan firfircooneyn gudaha gudaha haddii ay hesho jimicsi ku filan inta lagu jiro maalinta. Patterdale waxaa lagu qori karaa labo ama seddex terrier kale, ilaa iyo inta uu haysto shaqo ku filan iyo ugaarsi si uu jimicsi iyo raali uga ahaado. Haddii uu caajiso oo aan jimicsi lahayn, wuxuu la dagaallami karaa asxaabta digaagga.
Ugaadhyahan-yar-yar-yar ah waa eey shaqeeya oo u baahan jimicsi badan. Eygaaga ayaa loo baahan yahay in la qaato maalin kasta, kacsan, dheer socod ama orod . Inta lagu jiro socodka eeyga waa in loo sameeyaa ciribta dhinaceeda ama gadaashiisa qofka haya hogaanka, sida maskaxda eeyga maskaxdiisa hogaamiyaha ayaa hogaaminaya wadada, hogaamiyahaasina wuxuu ubaahan yahay inuu noqdo aadanaha. Jimicsiga iyo alaabta adag ee ugaadhsiga ahi waa siyaabaha lagu taliyay ee lagu qanciyo damaciisa ugaarsiga. Iyagu gudaha kuma firfircoon yihiin laakiin xirmo tamar ah ayaa dibadda ku jirta. Waxay jecel yihiin inay ordaan oo waxay ku raaxeysan doonaan raacitaanka adiga.
Qiyaastii 11-13 sano.
Is qurxin yar ayaa loo baahan yahay.
Hal mar, noocyo kala duwan oo Terrier ah ayaa ka jiray tuulo kasta oo go'doon ku taal waqooyiga Ingiriiska. Taranka loogu talagalay heerarka naadiga kennel ayaa hoos u dhigay noocyadan kala duwan, laakiin qaar ka mid ah jiilka fog ee aan la aqoonsan ayaa sii waday inay kobcaan. Patterdale waa mid ka mid ah noocyadan. Caadi ahaan lama yaqaan meel ka baxsan Ingiriiska, noocyadan waxaa guud ahaan laga helaa Great Lake's Lake District iyo Yorkshire. Magaca Patterdale waxaa loo doortay tuulada Cumbria, halkaas oo eeyaha ay ku badnaayeen. Waxaa loo adeegsaday jiir dawaco iyo ugaadhsade bakayle , Terter Terrier-ka looma dhalanin muuqaal ahaan, laakiin waxaa loo soo saaray awooddiisa shaqo. Mid ka mid ah soosaarayaasha ayaa sheegaya in muujinta isbarbaryaaca ay tahay wax aan sidaa u sii buurnayn, haddii ay sidaa tahayna, eey ayaa si fiican ugu shaqeyn kara laba madax, 'isla markiiba waxaan u dooran lahayn astaamahaas.' Patterdale waxaa markii ugu horaysay la keenay USA 1978. Mareykanka gudaheeda Eydu waxay ugaarsadaan wax kasta oo dhogorta leh oo ka sameysan qoryaha (groundhog), dawaco, rakoon iyo xitaa badger. Baabuur Mareykan ah oo Patterdale ku habboon oo loo yaqaan 'Rocky,' oo culeyskiisu dhan yahay 13 rodol, ayaa dhowaan soo sawiray calaamad 34-rodol ah (16 kg)!
Tanzi Terter Terrier-ka oo ah eey yar oo jirta 5 bilood
Bippie Terter Terrier-ka
Ku shub shukulaatada Patterdale Terrier eey yar 11 toddobaad jir
feeryahan iyo iskudhaf qiiqa basset
Lahaanshaha sawirka MQH Patterdale Terrier Kennel
Sawirka eeyaha ee 'Patterdale' waxaa iska leh MQH Patterdale Terrier Kennel
Eeg tusaalooyin badan oo Terter Terrier ah
Patterdale Terrier Sawirada 1
Patterdale Terrier Sawirada 2
Patterdale Terrier Sawirada 3
isku dhafka reer belgium iyo Jarmalka
Feeryahan Jarmal ah adhijir isku qas eey
kala badh feedh badh jarmal adhijirka